ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင် ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်၍ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင် ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်၍
Posted by ခင်ခ on Oct 31, 2012 in Buddhism, Facebook, Science & Religion | 23 comments
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျဖြစ်နေတာလေး တစ်ခုမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဘုရား။ အဘဘိုးဘိုးအောင် ဘိုးမင်းခေါင်တို့သည် ဘုရားဟောပိဋကတ်တော်တွင် ပါဝင်သည်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဘုရား။ တပည့်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းက ယခုအချိန်ထိ အနန္တောအနန္တငါးပါးကိုသာ ကိုးကွယ်ပူဇော်ဦး ချရာဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်ဘုရား။ ဘုရားဝတ်ပြုတိုင်းတော့ အမျှဝေရာတွင် အဘဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင်တို့ကို အမျှဝေပါတယ် ဘုရား။ သို့ပေမဲ့ ဦးချရှိခိုးခြင်းတော့မပြုပါဘုရား။အဲဒါတပည့်တော်မှာ အပြစ်ရှိပါသလားဘုရား။ တပည့်တော်မရဲ့ မိတ်ဆွေအချို့က ရှိခိုးသင့်တယ်။ ပိဋကတ်တော်မှာ သူတို့အကြောင်းပါတယ်စသဖြင့်ပြောကြပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်ခံယူတာကတော့ အနန္တောအနန္တငါးပါးကလွဲ၍ ပူဇော်ရာရှိခိုးဦး ချရာမရှိဟု သတ်မှတ်ပါသည်ဘုရား။ တပည့်သိချင်တာလေးကို ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
(၁) မိမိကိုယ်ကိုသာ အားကိုးရာ ဖြစ်တယ်။ တစ်ပါးသူဟာ အားကိုးရာမဟုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှသာ ကောင်းစွာရခဲရောက်နိုင် ခဲလှတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားများကို ရပါလိမ့်မယ်။ (ဓမ္မပဒပါဠိတော်၊ ၃၇)
(၅) ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတိုင်း နတ်တို့ကို အမျှဝေရင် နတ်တို့က ပြန်လည်စောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်။ သူတို့ကို အမျှဝေခြင်းနဲ့ပူဇော်ရင် နတ်တွေဟာ အထူးနှစ်သက်တယ်။ အမျှဝေခြင်းနဲ့ ပူဇော်တဲ့သူကို နတ်တွေက တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မိခင်တစ်ယောက်က မိမိရင်သွေးကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ် သလို ပြုလုပ်ပေးကြတယ်။ နတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကို ခံရသူဟာ မကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာရုံများနဲ့ မတွေ့ရဘဲ ကောင်းတဲ့အာရုံများနဲ့သာ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ (ဥဒါန၊ ပါ၊ ၁၈၈၊ ဋ္ဌ၊ ၃၇၉)
မေးခွန်းရှင်ပြောတဲ့ ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင်တို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပိဋကတ်တော်များတွင် မပါရှိပါ။ နတ်များကို ပူဇော်ပသခြင်း များ ပြုလုပ်ရမယ် ဆိုတာ အပေါ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ ကျမ်းဂန်လာများအရ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာ အမျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ စားသောက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပူဇော်စရာ မလိုဘူး ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဆက်စပ်မိတာနဲ့ သူရဿတီနတ်ကိုကိုးကွယ်မှုကို ပြောချင်ပါသေးတယ်။ သူရဿတီနတ်ဟာ ဟိန္ဒူဘာသာတို့ရဲ့အယူအရ ကမ္ဘာလောကကြီးကအစ ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်နတ် ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖန်ဆင်းရှင် နတ်စတာတွေကိုးကွယ်ရင် ကမ္မဿကတ-ကံ, ကံရဲ့အကျိုးကို ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားလို့ သရဏဂုံပျက်စီးပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကနေ ဟိန္ဒူဘာသာ ဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒီစကား ခိုင်မာမှုရှိဖို့ရန်အတွက် ကျမ်းဂန်များတွင် လိုက်လံရှာဖွေကြည့်ရာ “ရတနာသုံးပါးကို လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အမြတ်ဆုံးအလှူခံဟု မှတ်ယူကာ ရှိခိုးခြင်း၊ လက်အုပ်ချီခြင်း၊ ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း၊ အရိုအသေပြုခြင်းတို့ပြုလုပ်ရင် သရဏဂုံယူပြီးဖြစ်သွားတယ်။ သရဏဂုံ တည်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။ သရဏဂုံ တည်ပြီး တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟာ ရတနာသုံးပါးမှတစ်ပါး အခြား နတ်၊ ဘိုးတော်၊ တိတ္ထိရဟန်းစတဲ့ တစ်ဦးဦးကို တစ်လောကလုံးရဲ့ အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် လို့ နှလုံးသွင်း ကာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း စသည်တို့ပြုမိရင် မူလဆောက်တည်ထားတဲ့ သရဏဂုံ ပျက်သွားပေတယ်” လို့ သီလက္ခန်အဋ္ဌကထာဆရာက ဖွင့်ဆိုပြထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ (ဒီ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၂၀၇)
အဲဒီတော့ မိမိတို့က ကြောက်လန့်လို့ဖြစ်စေ၊ ရမ်းသမ်းပြီးတော့ဖြစ်စေ တခြားနတ်ဆိုး၊ နတ်မိစ္ဆာ၊ မကောင်းဆိုးဝါး၊ လောကမှာမရှိတဲ့အရာတွေကို ယုံကြည်မယ် ဆိုရင်လည်း မိမိတို့ ခံယူထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကနေ လျှော့ကျမသွားအောင် သရဏဂုံပျက်လောက်အောင်တော့ ရတနာသုံးပါးထက် ပိုမိုပြီး မကိုးကွယ်ကြနဲ့ပေါ့လေ။ ဘုရားစင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘုရားဆင်းတုတော်ပဲထားပြီး တခြားအရာများ အရံသဘောအဖြစ် သူများပြောတာ အဟုတ်မှတ်ကာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ချင်လည်း တခြားနေရာမှာ သီးသန့်ထားကြပါ။
လောကမှာ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့ စတုမဟာရာဇ်နတ်အစရှိတဲ့ နတ်တွေဟာ မိမိပြုလုပ်တဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို အမျှဝေပေးဖို့ပဲ လိုတယ်ဆိုတာ အထက်က တရားတော်တွေ ထောက်ဆကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လည်း နတ်တွေဟာ လူ့ပြည်က အစားအသောက်တွေကို မစားနိုင်ကြပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ နတ်သုဒ္ဓါလောက်မှ မကောင်းတဲ့အစားစာတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ လူတို့ကပြုလုပ်တဲ့ ကောင်းမှုကို အမျှဝေတဲ့အခါ သာဓုခေါ်ရင်တော့ သာဓုခေါ်တဲ့ နတ်တွေဟာ ကောင်းမှုတိုးပြီး စည်းစိမ်ချမ်းသာ၊ အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်းတွေ တိုးပွားသွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နတ်တွေကို ကောင်းစားစေချင်တယ်၊ မိမိတို့ကိုလည်း စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိကောင်းမှုလုပ်ပြီးတိုင်း အမျှဝေပေးကြပါလေ။
မြတ်ဗုဒ္ဓသေလွန်(ပရိနိဗ္ဗာန်စံ)တဲ့အခါမှာလည်း မင့်တို့ကို ငါသေသွားပေမဲ့ ကယ်တင်နိုင်သေးတယ်၊ ကယ်တင်ပေးဦးမယ်လို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ မင့်တို့ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီလိုအကျိုးတရားတွေတော့ ခံစားရမယ်ဆိုပြီး နည်းလမ်းပဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရမှာပါ။ လောကမှ အသာလွန်ဆုံး၊ အတုမရှိတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓသော် မှ သေလွန်တဲ့အခါ ဘာအစွမ်းမှ မရှိတော့ဘဲ မသေခင်က အဓိဋ္ဌာန်တာများသာ ရှိနေတော့တာမို့ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သေပြီးအစွမ်းသတ္တိတွေ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာ ယုတ္တိရှိရဲ့လား၊ ဖြစ်နိုင်ပါမလား။
သိဒ္ဓိရှင်၊ ၀ိဇ္ဇာသမားတွေကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်နေသူများက အဲဒီလူတွေဟာ သေပြီးသော်လည်း တန်ခိုးနဲ့ ကယ်တင်သေးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ တချို့က မသေဘဲအသက်ရှင်လျက် ရှိနေသေးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ယခုလူ့သက်တမ်းဟာ တစ်ရာသက်တမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် အထက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓ ပောာခဲ့တဲ့အတိုင်း အသက်(၁၀၀)ထက် အနည်းငယ် ကျော်လွန်သူ (၁၆၀)ပတ်ဝန်းကျင်သာ အသက်ရှည်မယ်လို့ ပထမအာယု၊ ဒုတိယအာယုသုတ် (သံ၊ ၁၊ ၁၁၀) တို့မှာလည်း မိန့်ကြားထားခဲ့တာကို ထောက်ဆကြည့်ရင် ထင်ရှားနေတာမို့ အသက်မသေဘဲ ကယ်တင်စောင့်ရှောက်နေတဲ့သူ မရှိဘူးလို့ သတ်မှတ်ရ ပါလိမ့်မယ်။
မိမိတို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့သူတွေဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓလုပ်မပေးနိုင်တာကို လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓထက် သာလွန်သူတွေဖြစ်နေရင်တော့ မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ အတုမရှိ မြတ်ဗုဒ္ဓမဟုတ်တော့ဘဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာ မိမိတို့ အဓိကထားယုံကြည်နေတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓထက် သာလွန်နေ သူများကို ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် စဉ်းစားဆင်ခြင် ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ မြတ်ဗုဒ္ဓထက် သာလွန်သလိုဖြစ်နေတဲ့ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ယုံကြည်မိရင် မိမိတို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပါဦးမလားဆိုတာ စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။
ဦးဇင်းတက်သိသမျှ ရေးဖြေပေးခြင်းကို ယခုတော့ ဒီမျှနဲ့ပဲ နားပါရစေ။ စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံး အသိပညာကြွယ်ဝကြပြီး ကိုးကွယ်ရာအစစ်ကို ကိုးကွယ်ရင်း အမှန်တရားရှိရာသို့ လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်……။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးပါရစေ။ ဒီလိုဂမ္ဘီရ ကိစ္စမျိုးဆိုတာ ပြောရခက်တယ်။ သို့ပေမဲ့ ထေရဝါဒထဲမှာတောင် သမထအမြင်သန်သူများက သူတို့တည်ရှိမှုကို မငြင်းပယ်သလို ကိုးကွယ်ရာအဖြစ် လက်ခံဖို့လည်း အားမပေးဘူး။ ကျန်တာတော့ ကိုယ့်အပိုင်းပေါ့လေ။ များသောအားဖြင့် လက်မခံသူများက ပိဋကတ်စာကို အကိုးအကားလုပ် ပြောကြတာများတယ်၊ ကိုယ်တွေ့ကြုံမှု မရှိကြပါ။ ဖြစ်သင့်တာကိုသာ စာနဲ့ဟပ်ပြီး ပြောတာမျိုးက လက်တွေ့ကြုံလို့ မျက်စေ့စုံမှိတ် အားကိုးတာနဲ့ လားရာခြင်း သိပ်မထူးပါ။ နှစ်ခုစလုံး အတ္တအစွဲနဲ့လို့ ပြောချင်တယ်။ လူကြမ်း နတ်ကြမ်းမခံနိုင်၊ လူမစွမ်း နတ်မ ဆိုတဲ့စကားတွေဟာ အတွေ့အကြုံများပေါ်ကနေ အခြေခံပါတယ်။ ရှိတယ် မရှိဘူး နှစ်ခုစလုံး ပညတ်အားဖြင် မှန်ပါလိမ့်မယ်။ ပရမတ်အလိုတော့ အားလုံးသည် အဟုတ်ထင်လို့ တကယ်ရှိနေတာမို့ ရှိတယ် မရှိဘူး နှစ်ခုစလုံး မမှန်ပါ။ ဒါကို ပညတ်အယူ ရက်စ် နိုး နဲ့ သွားမရောရန် လိုပါသည်။ သင့် မသင့်၊ ကိုက် မကိုက်သာ စဉ်းစားရန်ရှိသည်။
နှလုံးသွင်းပုံ စိတ်ထားပုံ မှန်ရင်တော့ စာအားကိုးတာ ပို ကုသိုလ်ရ သံသရာအတွက် အကျိုးများပါမယ်။ ငါအတ္တနဲ့ စွတ်ငြင်းတာ ဆိုရင်တော့ လွဲပုံခြင်း သာထူးမည် မထင်ပါ။ ဗေဒင်၊ လက္ခဏာလည်း ထိုနည်း၎င်း….။
ဦးဆုံးကွန်မန့်ကို သေချာကျနစွာရေးလာတဲ့ ဦးကြောင်ကြီးရေ ကျေးဇူးပါနော်။
လူကြမ်း နတ်ကြမ်းမခံနိုင်၊ လူမစွမ်း နတ်မ ဆိုတဲ့စကားတွေဟာ အတွေ့အကြုံများပေါ်ကနေ အခြေခံပါတယ်။ ဆိုတာတော့ သဘောကျတဲ့ အရေးလေးပါဗျာ။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေက ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေကို ကတော့တော့
အဘိဓ္ဓမာ သင်းတန်းပြီးမြောက် အောင်မြင်ထားတဲ့ဦးလေးက
နတ်တွေကို စည်းကပ် ကိုကွယ်ပါအိဆိုရင် ပြောတဲ့သူပါ သရဏဂုံပျက်စီးပျက်တယ်တဲ့
အမျှအတမ်းပဲဝေရတယ်တဲ့ အများကြီးပါဘဲ သူဆုံးမသွားတာ နောက်မှရေးတော့မယ်
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဖ၊ ဆရာဆိုတာကို
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရင် ကိုယ်အတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်ပါပြီ။
(မိမိတို့က ကြောက်လန့်လို့ဖြစ်စေ၊ ရမ်းသမ်းပြီးတော့ဖြစ်စေ တခြားနတ်ဆိုး၊ နတ်မိစ္ဆာ၊ မကောင်းဆိုးဝါး၊ လောကမှာမရှိတဲ့အရာတွေကို ယုံကြည်မယ် ဆိုရင်လည်း)
လောကကြီးမှာ မမြင်နိုင်တဲ့လောက သားတွေတကယ်ရှိပါတယ် ကိုယ်မမြင်ရပေမဲ့ မရှိဘူးဆိုပြီး ရမ်းသမ်း
ပြောမနေသင့်ဘူးထင်တာပါပဲ……….ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း နတ်တွေကို ကိုးကွယ်သင့်တယ်လို့မသတ်
မှတ်ပါဘူး…ကိုယ်တိုင်လည်းမကိုးကွယ်ပါဘူး နတ်စိမ်းတွေအဖြစ်တော့ လက်ခံယုံကြည်ပြီး လူတွေထက်
အဆင့်နိမ့်တဲ့ ဘုံဘ၀သားအဖြစ်သာ လက်ခံတာပါ…အမျှပေးပြီး မေတ္တာပို့တော့လုပ်သင့်တယ်
မမြင်ရတဲ့ လောကသားတွေမို့ မရှိဘူးဆိုပြီးလည်း ဇွတ်အတင်းမငြင်းသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
မမြင်ရတဲ့ လောကသားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း လက်ခံတယ်။
မကိုးကွယ်မိဖို့ဘဲ လိုမယ်ထင်တာလေ။ ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတောင် အမျှဝေတာတွေ မေတ္တာပို့တာတွေ ကို မေတ္တာသုတ်တရားအကျယ်အဟောမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ် မမေရေ။ မမေကွန်မန့်ကို welcome ပါဗျ။
အဖြူနဲ့အမဲလိုကွဲပြားအောင် ကျမ်းကိုးနဲ့တကွရှင်းလင်းပြတဲ့အတွက်ဦးတင်မိပါတယ်ဘုရား။ အတ္တာဟိ၊အတ္တနောနာထော ကျမ်းလာစကားကို အရှင်းကြီးပြဆိုထားပေမဲ့လဲ၊ လက်တွေ့မကျတဲ့ ပုံပြင်ဆန်ဆန် ဗုဒ္ဓသမိုင်းပုံရိပ်ကိုချယ်မှုန်းခဲ့ကြတဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်သော၊ သမိုင်းဆရာတွေရဲ့ ပယောဂကြောင့်၊ ဂေါတမ လည်းမြေလျိုးမိုးပျံတဲ့ တန်ခိုးရှင်လို့ထင်ကြသူတွေ ကဒုနဲ့ဒေးပါ။ ဂေါတမ နဲ့ တန်ခိုးအရာ ဖန်တီးပြောဆိုကြတဲ့ကိစ္စလေးလည်းဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်။
မင်းဘူးစက်တော်ရာကိုပြပြီး၊ ဂေါတမမြန်မာနိုင်ငံကိုကြွလာတဲ့အထောက်အထားလို့ဆိုကြသူတွေထဲ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေပါ ပါနေလို့ပါ။
ကဲ maungmoenyo ရေ
ခင်ဗျားနာမည်လေးကလည်း မိုးညိုဆိုတော့ ပြောရအုံးမယ်။ ကိုယ့်လူကို ကျုပ်ကောင်းကောင်း မှတ်မိပါတယ်။ ကိုယ့်လူ ဘာဘာသာ ကိုးကွယ်သလဲဆိုတာ ကျုပ်မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရှေ့မှာ “ဂေါတမ” လို့နာမည်ခေါ်တာမျိုးကို ဆင်ခြင်ပေးပါ။ အတော် ရိုင်းရာရောက်ပါတယ်။ အဲဒီလို နာမည်တပ်ခေါ်ရအောင် ကိုယ့်လူ သူငယ်ချင်း မဟုတ်ပါဘူး။
အာဝုသော ငါ့ရှင် စံလှဂျီး
သူနှစ်သက်ရာခေါ်ဆိုရာမှာ မိမိအလို ငါ့သဘော ( အတ္တ ) သည်
ဒေဝဒတ်သည် ဂေါဓမ အား ပျက်ဆီးရန်အားထုတ်၏ ( အကယ်စင်စစ်ပြု၏ )
ထိုအခါ ဂေါဓမ မှ ဒေဝဒတ်သည်ငါ့အား ပျက်စီးစေ၏ ထိုသူအား
ဆန့်ကျင်ကြကုန်ဟု ဂေါဓမ မဆိုခဲ့
ယ္ခုအခါ သင်သည် ဆိုလေ၏ သဘောကိုဆောင်၏
ခင်ဗျားက တကယ်ဆို ကျုပ်ကို အာဝုသော ခေါ်ဖို့ထက် ဘန္တေလို့ ခေါ်တာက ပိုကောင်းမယ်ဗျ။ ကျုပ်က ဝါပိုကြီးတယ်။ အင်း အဲဒါက အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဗျ။ သူတို့က လောဘ ဒေါသ မောဟ ကင်းလို့ ဒီလိုပြောတာ။ ဒီမန်းဂေဇက်ထဲက လူတွေက ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာ သေချာလို့ ကျန်လူတွေကို လေးစားတဲ့ အနေနဲ့ မခေါ်ဖို့ ပြောရတာ။
ဒီလူကို ကျုပ်သိပါတယ်။ ဆွေးလဲ ဆွေးနွေးဖူးတယ်။
နတ်တွေကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရင် သရဏဂုံ ပျက်တယ်ဆိုထားတော့ ရှိခိုးမိရင်ရော
တွေးမိတာက စေတီ၊ဘုရားကျောင်းကန်တွေမှာ နတ်ကွန်းတို့၊နတ်နန်းတို့ဆိုတာတွေ ရှိတတ်တယ်လေ..ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀တုန်းကတော့ သူများတွေ၊လူကြီးတွေ နတ်နန်း
ရှေ့မှာ အထဲကရုပ်တုတွေ ထိုင်ကန်တော့ရင် လိုက်ကန်တော့တာပဲ..
သိတတ်လာတော့ ဘုရားရှင်ကလွဲလို့ မကန်တော့ဘူးဆိုပြီး မကန်တော့ဖြစ်တော့ဘူး..
မကန်တော့ဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ထဲတော့ မစော်ကား၊ဘာမှမမြင်ပါဘူး….
နေ့စဉ် သရဏဂုံတည်၊နတ်တွေ ကောင်းမှုအမျှဝေတာကတော့ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်လည်း
မဟုတ်၊ အချိန်လည်းအကြာကြီးလည်း ပေးစရာမလိုလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း အလေ့တစ်ခု
မြင်အပ် မမြင်အပ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လက်ခံခြင်း မခံခြင်း နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောချင်တာပါ။
ကြံတောသချိုင်း ရွေ့တဲ့ အကြောင်း ပိုစ်တွေ ဖတ်ဖူးတယ်။ ကားနဲ့ တက်ကြဟေ့.. တက်ကြ ဆိုပြီး ရွေ့ပေးရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဖတ်ဖူးတယ်။ အဲဒီ တုန်းက ရွေ့တော့ ရွေ့တာပေါ့.. အခု အဲဒီနေရာမှာ ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံက ညပွဲတွေ အခုထိ ကြည့်တဲ့ လူ မရှိဘူး ရုပ်ရှင် ပြနေတုန်း မီးခပ်မှိန်မှိန် အနေအထားမှာ လည်ပင်းညှစ်တယ် ခြေထောက်ဆွဲတယ် မုန့်တွေပါသွားရင် အတင်းလု ခံရတယ် ဘာညာ ပြောသံတွေ အခုကြားတဲ့ အပြင် ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး.. မရှိဘူး ရှိတယ် ဆိုတာ.. သက်သေအနေနဲ့ သိချင်ရင် ည၆ခွဲ ပွဲလေး သွားကြည့်ပါလား လို့.. တလောကတော့ တပတ်လောက် ပိတ်ပြီး ရှင်းလင်းရေး လုပ်တယ် ကြားမိတယ်.. အခုတော့ ပြန်ဖွင့်နေပြီ.. ကောင်းနေမလားတော့ မသိဘူး သို့သော် ညဘက်ပွဲတော့ လူ မရှိဘူး။ ရုပ်ရှင် ကြည့်ပြီး ဘာမှ မထူးတော့လည်း ရုပ်ရှင် ကြည့်ရတယ်လို့သာ မှတ်.. :hee:
အမဆူးရေ အဲဒီအကြောင်းတွေက ပြောရခက်တယ်၊ ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာလေးတစ်ခုက အဲလိုတွေရှိတယ်လို့ မယုံတဲ့သူကို ကွန်တော် shopping စင်တာတစ်ခု ဆောက်လုပ်ရေးမှာ ညဖက်အလုပ်လုပ်တော့ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် အပေါ်၎ထပ်ကနေ အောက်ကိုတစ်ယောက် ထဲဆင်းဖို့ ကိစ္စကြုံလာလို့ သူကိုသွားဖို့ပြောတော့ သူတစ်ယောက်ထဲမသွားရဲဖူးတဲ့၊ ကျွန်တော် မှာရယ်လိုက်ရတာ မပြောပါနဲ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် မမြင်အပ်တဲ့ သတ္တာဝါတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ မယုံဘူးလို့ဆိုနေစဲဗျာ။
ဖေ့ဘွတ်မှာ တွေ့တာ မနေ့က ပြောတာနဲ့ တိုင်ဆိုင်လို့ လာပြတာ.. ကင်မရာ လှည့်စားချင်လေလား.. တကယ်လေလား သိဘူးနော်.. အပျင်းပြေတော့ ကြည့်လို့ ရတယ်။
ထူးထူးခြားခြားဖစ်အောင် ဘားဂလိ နဲ့ မန့်မဗျာ.
ချစ်လှဇွာသော. ယောက်ခ်မရီး မိုက်ကယ်သဂျိုင်ခီးက ဗွေမယူဝူး ဆိုရင် ပေါစ့်.
နော့ထ် မန်ဘာစ့်အော့စ် အန္တော အနန္တ ငါးပါးစ်.
ဆိုး အိုင် ဒုန့် တပုံ ရက်စပက် တူ သမ်းန်း
အိုင် ဒုန့်ထ် ဝဏ္ဍ ခွစ်တစ်ဆိုက်ဇ် ဒ ဟူးစ် ဘီလိဗ် သို့စ် သင်းဂ်း.
ဒူး ဝှက်ထ်အဲဗားယူဝမ့်ထ် ဟွမ်းယူအာ စတေးလ် အလိုက်ဗ်
တောက်စ်… နင်အတတ်ဆန်းဒါမရေးမကျီးဘူး သဘောပေါက်အောင် အတော်ဖတ်လိုက်ရတယ် ခွီး… :buu:
သရဏ ဆိုတာ ကာကွယ် တားဆီးတတ်သော ပါ။
၁. ဘာသာကူးပြောင်းရင် သရဏံဂုံ ပျက်ပါတယ်။
၂. သေရင် သရဏံဂုံ ပျက်ပါတယ်။
၃. ဘိုးတော်တွေ နတ်တွေကို ကန်တော့ရင် သရဏံဂုံပျက်ပါတယ် ။ ဒါပါပဲ ။
နတ်တွေတစ်ကယ်ရှိတာကိုတော့ ယုံကြည်တယ် . . . ယုံတာမယုံတာထက် … နတ်နဲ့နဂါးမလှည့်စားကောင်းဘူးတဲ့ . . .
ကိုစံလှကြီးက……”ကောင်းကောင်းသိတယ်” လို့လည်းပြောတယ်။ “ဘာကိုးကွယ်လဲမသိ” လို့လည်းပြောတော့……မျက်စေ့လည်စရာဖြစ်နေပါပေါ့…ဥိးစံလှကြီးရေ့။ ကြည့်ပြီးလည်း မောဟစိတ်ထွက်ပါအုံးခင်ဗျ။
ဂေါတမ ဟာ သာမာန်လူပုဂ္ဂိုလ်ထက်လွန်တဲ့ သဗ္ဗည ဉာဏ်ကိုရထားပြီးပြီမို့ လူတို့ရဲ့အထွတ်ဆိုတာငြင်းစရာမဟုတ်ပေမဲ့၊ သူဟာ သာမာန်လူသားတစ်ဥိးဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို မျက်စေ့မှိတ်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ဇွတ်ငြင်းရင်တော့ အမှားကြီးမှားလိမ့်မယ်ထင်ပ။ သက္ကဋ ကိုအရည်ကျိုသောက်ခဲ့တဲ့ ဆရာပါရဂူရဲ့ကျမ်းလာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင် ဂေါတမ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကိုကြိမ်ဖန်များစွာ မရေမတွက်နိုင်အောင်သုံးခဲ့တာကိုသတိရပါအုံး။ ထိုနည်းတူ များစွာသော အထင်ကရကျမ်းတွေမှာ လည်းထိုနည်းတူသုံးခဲ့ကြတာတွေကို မမေ့ကြပါနဲ့…..တကယ်တော့ ကိုးကွယ်မှုဆိုတဲ့ စကားကိုသုံးရင်တောင်ဗုဒ္ဓအယူမှာ ကြီးစွာသော သတိထားကြရပါမယ်။ ၀ါတော်(၄၅)၀ါလုံးဟာခဲ့သမျှတရားအားလုံး (၄)ပါးသစ္စာနဲ့ချုပ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြောင်းကိုသာဆိုခဲ့လမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့ တရားအားလုံးဟာ ဒီကနေ့သာမက သက်ရှိလောကတည်နေသရွေ့အစစ်အဆေးမှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်တာမို့ သာမာန်ပုထုဇာဉ်တွေဖြစ်တဲ့မောင်မိုးညို နဲ့တကွ ကိုစံလှကြီးတို့ အားလုံးက လက်ခမောင်းခတ်နိုင်တဲ့အယူဝါဒမဟုတ်လား။
Little message: We all have to accept the fact there is no pessimistic say in the world of faith!
ဒီမှာ maungmoenyo ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဆရာ
ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို လာပြီး ရှေ့စကားနဲ့ နောက်စကား ဘာညာ လာပြောချင်သေးတယ်။ သွားစမ်းပါ ကိုယ့်လူရာ။ ကျုပ်စိတ်ထင် ဒါတွေက ကျုပ်နောက်မှ ဖြစ်လာတာတွေပါ။ ပြောတဲ့စကားကို ကွင်းခတ်တာလည်း သိပ်အတုမယူပါနဲ့။ အံတိုနေပြီ။ ခင်ဗျားကို ကျုပ် “ကောင်းကောင်းသိတယ်” လို့မပြောပါဘူးဗျာ။ မယုံရင် ကွန်မန့်ကို ဖတ်ကြည့်ပါအုံး။ “ခင်ဗျားကို ကျုပ်ကောင်းကောင်း မှတ်မိပါတယ်” လို့ပြောတာပါ။ မှတ်မိပါတယ် ဆိုတာက ခင်ဗျားကို လူတယောက်အနေနဲ့ မန်းဂေဇက်ထဲမှာ စာရေးတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးအနေနဲ့ မှတ်မိတာလေ ဆရာရဲ့။ ခင်ဗျား ဘာဘာသာ ကိုးကွယ်သလဲဆိုတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ personal life ကို ကျုပ်သိစရာ မလိုဘူးလေ။ ကဲ မိတ်ဆွေများလဲ တခါတည်း ကျနော်တို့ မြန်မာစကားက နည်းနည်းလေး အသုံးအနှုန်း ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းတတ်တာကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ဒီမိုးညိုဆိုတဲ့လူ စကားလေး နှစ်လုံးလောက်ကို ကိုယ်ကြိုက်သလို ပြင်ပြီး ပြောတတ်ပုံကို ကြည့်ကြပါ။
ကိုယ့်လူရေ “မှတ်မိပါတယ်” နဲ့ “သိပါတယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခုက မတူဘူးနော်။ ခင်ဗျား လိုအပ်ရင် ခင်ဗျားကို ကျုပ်မြန်မာစာ အချိန်ပို သင်ပေးပါမယ်။ နောက်ပြီး သိတယ်ဆိုတာကလဲ အဓိပ္ပါယ် အများသားဗျ။ ဥပမာ ခင်ဗျားက သူခိုးတယောက် ဆိုပါတော့။ ဒီမိုးညိုဟာ သူခိုးဆိုတာ ကျုပ်သိပါတယ်လို့ ပြောတာနဲ့ ခင်ဗျား ဒီနေ့ ဘယ်အိမ်ကို ခိုးလာသလဲဆိုတာ သိတယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ရှင်းနေတာကို ကိုယ်လိုရာဆွဲပြီး ရှုပ်အောင်မလုပ်နဲ့ဗျ။ အဲဒါ မိုးပြာဆရာတွေ လုပ်လေ့ရှိရှာတယ်။
ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘုကို ကျုပ်ပြောသလို “ဒီလူကို ကျုပ်သိပါတယ်” လို့ပြောတာဟာ ခင်ဗျားကို မိုးညို မိုးညိုဆိုတဲ့လူ အနေနဲ့ သိတယ်လို့ပြောတာ။ ဥပမာ “သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ကျုပ်သိပါတယ်”လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ သမ္မတကြီးနဲ့ သူ့မိန်းမ ဘယ်တုန်းက သမီးရည်းစား ဖြစ်တာလဲလို့ သိစရာ မလိုဘူးလေဗျာ။ “သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ကျုပ်ကောင်းကောင်း ရင်းနှီးပါတယ်” လို့ ပြောရင်တော့ သမ္မတကြီးရဲ့ အတွင်းရေးတွေလည်း သိချင်သိမှာပေါ့ဗျာ။ အမယ်လေး နှစ်လုံးထဲကို ရှုပ်အောင် လုပ်နေတယ်။ ကျုပ် အမြင်အရ ခင်ဗျား မြန်မာစာ မြန်မာစကား မတတ်သေးတာလား စကားတွေကို လှည့်ပြီး ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တာလား တခုခုပဲ။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားကို ကျုပ်က ဒီမန်းဂေဇက်ထဲက ကျန်လူတွေကို လေးစားမှုပေးတဲ့ အနေနဲ့ သူတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခင်ဗျား ခပ်ရိုင်းရိုင်း နာမည်တပ်ခေါ်တာ ဆင်ခြင်ဖို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ မဆိုင်တဲ့ အပြင်ကလူတွေ ဆရာပါရဂူတို့ ဘာတို့ ဆွဲထည့်ပြီး မျက်စိလည်အောင် မလုပ်နဲ့လေ။ အဲဒီလူတွေက ဒီနေရာနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ဟာ အတော်ကို စကားလှည့်တတ်တယ်ဗျ။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့နဲ့ ပြောရင် အတော်သတိထားရတာ။ နောက်ပြီး ပြောရအုံးမယ်။ သက္ကဋဘာသာက ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဘာသာရဲ့ စာပေဗျ။ ဗုဒ္ဓစာပေကို သက္ကဋဘာသာသို့ ပြောင်းရေးရင် ပြောင်းတဲ့ရဟန်း အာပတ်သင့်တယ်ဗျ။ အမှန်တော့ ပါရဂူက အဲဒီဝါဒကနေ လာတာဗျ။ ဒီတော့ သူ့မှာရှိတဲ့ ကြည်ညိုစိတ်က ဘယ်လိုမှ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မတူနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို ခေါ်တာ။ အဲဒါ သူက အပြင်မှာခေါ်တာ။ မန်းဂေဇက်ထဲ လာခေါ်ရင်လဲ ခင်ဗျားကို ပြောသလို ပြောရမှာပဲ။ မဆိုင်တာတွေ သိပ်ထည့်ပြီး ရှုပ်အောင်မလုပ်နဲ့ ကိုယ့်လူ။
မောလိုက်တာ။ မိတ်ဆွေတို့ ဒီမိုးညိုဆိုတဲ့လူ စကားလှည့်ပြောတာကို ဗဟုသုတရအောင် ကြည့်ထားကြပါ။ ဒီလူက ကောက်ကျစ်တဲ့လူပဲ ဟီး ဟီး။
( (အေ=သဘောထား)+ (ဘီ=ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်) +(စီ=ကွဲလွဲခြားနားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း) = ပဋိပက္ခ )
ဘေပုံထီးပုံ ထီ ဘေပုံထီးပုံ ထီ
ခင်ဗျား မူးနေပြီလား။ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကို အားနာလို့ ဒီကွန်မန့်က နောက်ဆုံး ဒီပို့စ်မှာ ရေးတာပဲ။ ဘယ်ကလာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ရမှာလဲဗျ။ ဒါ ဒီမောင်မိုးညို ဆိုတဲ့လူ စကားလှည့်ပြောနေတာကို principal ကျကျ ရှင်းပြနေတာ။ အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဗျ။ ခင်ဗျားပေးတဲ့ လင့်ခ်ကတော့ အခုမှ ဝင်ကြည့်မိပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျုပ်က တခါတခါ သူကြီးက ဖတ်စေချင်လို့ ဆိုပြီး sticky ပေးထားရင် ဝင်မကြည့်ဖြစ်တာ များတယ်။ သိပ်ကြာနေမှ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ရေးတဲ့လူနဲ့ မသိသလို ဘာမှလည်း မှတ်ချက်မပေးပါဘူး။ သဘောတရား ကောင်းပေမယ့် လက်တွေ့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘုရားရှင်တောင် တိတ္ထိတွေနဲ့ ဝါဒဆွေးနွေးပွဲတွေ ရှိခဲ့သေးတာပဲဗျ။ နောက်ပြီး မန်းဂေဇက်ရဲ့ စည်းကမ်းကိုက မတူလည်း ဆွေးနွေးနိုင်တယ်။ အကျိုးအကြောင်း ပြပြီး ငြင်းခုန်နိုင်တယ် မဟုတ်လား။ တခါတလေ ကျုပ်စိတ်ထင် ခင်ဗျားတို့ ဖြစ်နေတာက ကိုယ့်လူက ပြောလိုက်ရင် ငြိမ်နေပြီး သူများ ချေပလို့ ကိုယ့်လူခံရပြီဆိုရင် မေတ္တာပို့ပါတို့ ဘာတို့ ဆောင်းပါးတွေ ထွက်လာတတ်တယ်။ ခင်ဗျားပေးတဲ့ လင့်ခ်ထဲက သဘောတရားကိုတော့ ကျုပ်သုံးမှာ မဟုတ်လို့ လာပြလည်း ဗဟုသုတ အနေနဲ့ပဲ ဖတ်မိတယ်။
အခု ခင်ဗျားကို ကျုပ်ဝါဒ ပြောခဲ့မယ်။ ကိုယ့်ကို တိုက်ခိုက်တာကို အလိမ္မာဆုံး ပထမ ခံယူတဲ့နည်းက လျစ်လျူရှုနည်းတဲ့။ နောက်တနည်းက အဲဒီလို လျစ်လျူရှုပြီး မနေနိုင်ရင် ဒီထက်ကျောပြီး ပြောပစ်လိုက်တဲ့။ နောက်တနည်းက အဲဒီလို မလုပ်နိုင်ရင် ရယ်ပစ်လိုက်တဲ့။ လျစ်လျူလဲ မရှုနိုင် ပိုသာအောင်လည်း မပြောနိုင် ရယ်လဲမရယ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ အဲဒါ ခင်ဗျားခံသင့်ခံထိုက်တဲ့ အရာပဲတဲ့။ မန်းဂေဇက်ထဲမှာ ကျုပ်ပထမ နည်း၂နည်းပဲ သုံးတယ်။ ကျုပ်လျစ်လျူ ရှုထားတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ ကျုပ်ကို ပြောမှန်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်လျစ်လျူရှုထားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့နဲ့ မပက်သက်ချင်လို့။ အတော်များများကိုတော့ ပိုသာအောင်ကို ပြောတယ်။ ဒီမှာတော့ ရယ်လို့ မရဘူးပေါ့ဗျာ။ ကွန်မန့်နဲ့တော့ ရယ်လို့ရမှာပေါ့။
ဒီမောင်မိုးညို ဆိုတဲ့လူက စကားကို လှည့်ပြောတတ်တဲ့ လူလိမ်ပါ။
ကိုခင်ခရေ စကားကြော ရှည်မိလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။
ကဲကျုပ်လဲ အခုမှပြန်ရောက်တာပါ။မောင်မိုးညိုဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အရင်ထဲက ကွန်မန့်တွေမှာ ကျုပ်နဲ့ ဆုံဖူးတယ်မှတ်ပါရဲ့ ။အရင်ဆုံးမေးချင်တာက ကိုမိုးညို ခင်ဗျားက တစ်ကယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးပါလား။ကျုပ်ကတော့မထင်ဘူးဗျ။ဖြစ်စေချင်တာကတော့ ဒီ(ပိုစ့်)နဲ့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေမပြောချင်သလို ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလဲ စော်ကားတဲ့ စကားလုံးတွေမသုံးစေချင်ဘူးဗျာ။ကိုစံလှကြီးရေ အဲကောင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ ကျုပ်မထင်ဘူးဗျ။မိုးပြာလဲဟုတ်ပုံမရပါဘူး။ကျုပ်တင်းတင်းသွားတာတွေကလဲ အဲလိုကောင်တွေကြောင့်ပါပဲ။ကျုပ်ကအရိယာ သူတော်စင်မဟုတ်တော့လဲ အချိန်ရရင်ရသလို ဝင်ပါရပါလိမ့်မယ်။အခုတော့ ဒီလောက်ပဲပြောပါဦးမယ်။